Iyo itsva Apple Watch yatove kutengeswa uye izvi ndizvo zvinhu zvadzo zvikuru | Ndinobva mac
Iyo itsva Apple Watch yatove kutengeswa uye izvi ndizvo zvinhu zvavo zvikuru
Nhasi izuva iro vazhinji venyu muchaenda kuchitoro cheApple kuti muone, bata uye pamwe kutotenga imwe yemawachi matsva kubva kukambani yeCupertino. Mangwanani ano kutengeswa kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, iyo nyowani Apple Watch Series 2 uye maAirPods atanga. Zvakare vamwe venyu vari kunhonga chigadzirwa chakachengetwa mazuva mashoma apfuura uye nhasi izuva rakanaka kune vese vashandisi veApple. Naizvozvo, chekutanga pane zvese uye mune yekutengwa kweiyo nyowani yeApple Watch Series 2, zvatiri kuzogovana nemi mose misiyano inonyanya kuoneka pamusoro pemhando yapfuura yeApple's smartwatch uye nekudaro mune zvishoma hongu ndeipi yaunofanira kusarudza.
Chinhu chekutanga kutaura ndechekuti iyo processor yekuvandudza muApple Watch Series 1 modhi yakatanhamara. Saka avo vashandisi vasingade kana vasingade iyo nhau yakapihwa neiyo nyowani modhi yakatangwa nhasi kana kuda kuchengetedza mari shoma pakutenga mukutsinhana nekurasikirwa nezvimwe maficha, uyu unogona kunge uri muenzaniso wekutarisa. Naizvozvo mushure mekuratidzwa Chitatu chapfuura ngatione mutsauko uripo pakati pemhando mbiri idzi.
Chaizvoizvo Kune matatu mamodheru eApple akangwara wachi. Iyo ine aruminiyamu kesi, iyo ine simbi kesi uye pakupedzisira inonyanya kusarudzika ine zvedongo kesi inotsiva iyo yegoridhe modhi. Pakati peaya matatu mamodheru tinowana maviri akasiyana masize kesi, iyo 38 mm uye iyo 42 mm. Ipapo isu zvakare tine sarudzo yekusarudza pakati pemitambo tambo, rakarukwa nylon, dehwe kana tambo dzeHermès kana iyo Nike modhi.
Zvakanaka, tataura izvozvo, tinogona kutaura kuti iyo zvedongo modhi iri yakati pfuurei kupfuura iyo yese. kusiya zviyero zvemarudzi ese zvinotevera:
0.1 Nhepfenyuro dzeApple 1
0.2 Nhepfenyuro dzeApple 2
0.3 Apple Yekucherechedza Series 2 (Ceramic)
0.4 Nhepfenyuro dzeApple 1
0.5 Nhepfenyuro dzeApple 2
1 Mitengo uye kuwanikwa
1.1 Nhepfenyuro dzeApple 1
1.2 Nhepfenyuro dzeApple 2
Apple Yekucherechedza Series 2 (Ceramic)
Kana tangove nezviyero zvakajeka izvo zvakanyatso fanika zvakafanana mune ese mamodheru kunze kweiyo diki misiyano mune zvedongo modhi, tinoenda ne zvinhu zvakatanhamara yemawachi matsva aya atangwa nhasi neApple neyemhando yapfuura yatinoti Apple Watch Series 0
Dual-core S1P processor (iyo yekare yaive imwechete-musimboti S1)
Kuramba kupwanya IPX7 (kunyudzwa zvizere pa 1 mita kwemaminitsi makumi matatu)
Ion-X girazi uye yakasanganiswa kumashure
OLED Retina Ratidza (450 nits yekupenya)
Kuzvimiririra kwemaawa gumi
Aluminium, simbi isina simbi uye zvedongo kesi
Dual-core S2 processor (iyo yekare yaive imwechete-musimboti S1)
50m kuramba kwemvura
Ion-X kristaro (Sport uye Nike +) kana nesafiri (Simbi, Ceramic, Hermes) uye zvedongo shure pamusoro mhando dzose
OLED Retina Ratidza (1000 nits kupenya)
Mitengo uye kuwanikwa
Mutengo ndiwo unonyanya kukosha pane aya mamodheru uye ndeyekuti Apple haisati yabata mitengo yemhando yekare (yakadzokororwa neiyo nyowani Series 1 processor) uye ichi chingave chinhu chekufunga nezvevaya vasingade iyo GPS uye kuramba kwemvura kusvika makumi mashanu.
38mm modhi ye369 euros
42mm modhi ye409 euros
38mm modhi ye439 euros
42mm modhi ye469 euros
Nezve kuwanikwa kweiyo wachi chaizvo zviri fair. Apple inotitaurira pawebhu kuti kutumira kunotora pakati pemasvondo matatu kusvika mashanu, chimwe chinhu chinogona kudzikiswa nekufamba kwemaawa, asi zviri nani kuti zvive pachena kuti kusvika pakupera kwaGumiguru kana kutanga kwaNovember ( kuita kutenga izvozvi panguva yekunyora) hatichazvigamuchira. Pane kupokana, stock iri muzvitoro inoita kunge yakati kwirei uye kana iine mamodheru akati wandei nhasi, inoramba ichionekwa kuti inotengeswa sei uye kana ichikwanisa kuchengetedza stock.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo itsva Apple Watch yatove kutengeswa uye izvi ndizvo zvinhu zvavo zvikuru
John Bakerma N akadaro
Iko kune here kushomeka kana uchiendesa chekare?
Pindura kuna John Bakerma N
Mos GO: Bhatiri rekunze kubhadharisa Mac yako?